Xildhibaan Saleebaan Cali Koore oo khiyaamo qaran ku eedeeyey Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee Wakiillada oo qorshahan hordhigay golaha | Togdheer News Network
Xildhibaan Saleebaan Cali Koore oo khiyaamo qaran ku eedeeyey Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee Wakiillada oo qorshahan hordhigay golaha
Hargeysa (Togdhnews)- Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa taageeray wadahadallada u socda xukuumadda Somaliland iyo maamulka la baxay Khaatumo ee uu hoggaamiyo Cali Khaliif Galaydh.
Fadhi uu yeeshay Golaha Wakiilladu shalay oo uu hoggaaminayey Guddoomiye-ku-xigeenka aqalkaasi Md. Baashe Maxamed Faarax, ayaa lagu soo bandhigay warbixin uu soo diyaariyey Shirguddoonka oo ku saabsanayd waxqabadkii golaha ee intii u dhaxaysay kalfadhigan iyo kii ka horreeyey, waxaanna lagaga dalbaday xildhibaannada inay taageeraan wadahadalka u dhexeeya Somaliland iyo Khaatumo, taas oo cod aqlabiyad ah lagu meelmariyey.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in wefti uu hoggaaminayey Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad Md. Baashe Maxamed Faarax oo xubnihii wehelinayey uu ka mid ahaa xildhibaan Maxmed Axmed Dhakool oo labaduba ka soo jeeda deegaannada Gobolka Sool ay dhawaan kulan kula soo yeesheen deegaanka Xidh-xidh hoggaamiyaha kooxda Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galaydh oo uu diyaar u yahay wadahadallada Somaliland.
“Kulankaas waxay labada dhinac kaga wadahadleend saddex arrimood oo ta kowaad tahay wadahadalka Somaliland iyo Khaatumo, halka labada qodob ee kale ahaayeen arrimaha deegaanka, waxaannu Cali Khaliif sheegay in arrimihii u socday Somaliland iyo Khaatumo ay meel wanaagsan u marayaan haddii ay tahay dhinaca nabadgalyada iyo siyaasadda.
Sidaas darteed, weftigaa Guddoomiyuhu hoggaaminayey waxay ka codsanayaan golahan inuu taageero arrintaas,” ayaa lagu yidhi warbixintaasi.
Intaas kadib xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiillada oo uu ka mid yahay Md. Cabdillaahi Xuseen Cige (Balaaki), ayaa taageeray qorshahan, waxaannu yidhi, “Guddoomiye inaga oo og dawladdu inay wadahadal la waddo Khaatumo oo shirguddoonkeenuna uu ka qaybgalay wadahadalkaa, markaa waxaan soo jeedinayaa in golaheennu ku taageero hawshaa ballaadhan ee dawladdu wado ee nabadgalyada.”
Sidoo kale, xildhibaan Cumar Sanwayne, ayaa isna ku tilmaamay arrintan inay tahay dhammaystirka qaranimada Somaliland oo loo baahan yahay in la dhiirrigeliyo, “Arrintan la soo jeediyey waa nabadgalyada iyo hawlaha qaranka ee aynu u baahannahay in si degdeg ah wax looga qabto oo waddanka nabadgalyo buuxdaa ka dhacdo, waana dhammaystirkii qaranka, aad iyo aadna waan u taageersanahay,” ayuu yidhi.
Guddoomiyaha golaha ayaa intaas kadib ka dalbaday mudanayaasha inay u codeeyaan taageerada wadahadalka Somaliland iyo Khaatumo, kuwaas oo iyaguna si aqlabiyad ah ugu coddeeyey arrintaasi oo aanay jirin cid diiday, hal mudane oo ka aamusay mooyee.
“42 Xildhibaan baa ogolaaday, hal xildhibaan wuu ka aamusay, Guddoomiyuhuna ma codayn, sidaas ayuu qaraarku ku noqday in la taageero wadahadallada u socda Somaliland iyo Khaatumo,” ayuu yidhi Guddoomiye Baashe Maxamed Faarax kadib markii uu ku dhawaaqay natiijada codbixinta xildhibaannada.
Haseyeeshee, xildhibaan Saleebaan Cali Koore oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay Gobolka Sool, ayaa ka soo horjeestay arrintaasi oo uu ku tilmaamay mid sharci-darro ah, waxaannu ku eedeeyey Guddoomiye Baashe inuu ku kacay dambi khiyaamo qaran ah.
Isagoo arrintaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi, “Horta waa Baashe (Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad) oo inta yar ee Cirro iyo shirguddoonku maqanyahay ayuu ka faa’iidaysanayey oo dhawr nin oo uu soo xushay ayuu saaka hoosta uga sheegay, waana sharci-darro arrintaasi, ma waxa la taageerayaa nin yidhi xukuumad baan ahay joogta Somaliland, waa arrintii yarayd ee shirkii ay halkaas isugu tageen iyagoo qoys ah, wax annaga iyo dadka deegaannada Gobolka Sool khuseeya midna maaha, xukuumaddu haddii heshiis la galayso marka uu dhammaado ayey caddayn doontaa in heshiis dhacay iyo in aannu dhicin, laakiin hadda nin leh waxaan ahay dawlad Khaatumo la yidhaa nin golaha keenay waa dambiile qaran, dastuurka qaranka ayey ka soo horjeedaa, waa dadka (Baashe) aanay Somaliland-nimadu ka dhaadhacsanayn qalbigiisa iyo calooshiisa, sababta oo ah dalku dastuur buu leeyahay, nin leh madaxweyne ayaan ahay, wasiirro iyo xukuumad baan leeyahay oo dalka gudihiisa ku jira ha la taageero oo ha la aqoonsado maamulka Khaatumo waa caadifad reernimo, dastuurka ayaanu meel kaga dhacay, waan in lagu soo eedeeyaa qaran-dumisnimo.”